Newbridge dia miorina eo an-tsisin'ny lemak'i Curragh ary fehezin'ny Bog of Allen sy Pollardstown Fen. Fantatra amin'ny fiompiana soavaly irlandey, fampiofanana ary hazakaza-tsoavaly ilay faritra ka tsy mahagaga raha tototry ny manodidina ny toeram-piompiana mpianatra ary koa ny Curragh Racecourse. Niitatra haingana ny tanàna taorian'ny nananganana ny Camp Curragh tao amin'ny 19th taonjato.
Ny tanàna, amoron'ny reniranon'i Liffey, dia mety ho fanta-daza indrindra amin'ny maha-tranon'i Newbridge Silverware izay nanamboatra cutlery teto hatramin'ny 1934 ary tato ho ato izay manana ivon-toeram-pivarotana lehibe indrindra any Irlandy - Whitewater.
Ireo tanàna mangina any Athgarvan, Kilcullen ary Allen dia eo akaiky eo ihany koa ary ny golf farany, ny Royal Curragh. Ary raha mihaino tsara ianao, ny Curragh Plains sy ny Hill of Allen akaiky dia mitantara angano momba an'i St Brigid, na Fianna ary Dan Donnelly.
Berney Bros dia miorina amin'ny asa-tanana, kalitao ary fanavaozana amin'ny zavatra rehetra ilainao amin'ny soavaly sy ny mpitaingina azy.
June Fest Festival dia mitondra any Newbridge ny tsara indrindra amin'ny Art, Theatre, Music ary Family Entertainment.
Lily O'Brien's dia namorona sôkôla manondraka am-bava ao amin'ny Co. Kildare nanomboka tamin'ny 1992.